सोमवार, जेठ १९, २०७७ ०६:१९:४४ युनिकोड
उज्वलजंग शाह । कानुनले सबै नागरिकलाई समान किसिमले हेर्छ । ब्यक्ति हेरेर यो र त्यो भन्ने कुरा कानुनले छुटाउदैन पनि । चाहे त्यो उच्च पदासिन ब्यक्ति होस् वा सामान्य नागरिक उसले देशको कानुन पालना गर्दिन भन्न पाउदैन । विधीको शासनलाई स्विकार गरि कानुनी शासनको प्रत्याभुत गर्न सक्नु नै असल नागरिकको कर्तब्य हो । यस सवालमा एक नागरिकको हैसियतले पुर्व सभामुख महराले निकै शालिनता देखाएका छन् । महरा वरियता क्रममा देशको ५ औं स्थान पर्ने सभामुखको कुर्सीमा पदासिन रहेकै अवस्थामा यौन काण्डमा मुछिनु उनका लागि ठुलो दुर्भाग्य हो । तर आफु माथि सोझिएको नैतिकताको प्रश्न उपरको सवाल माथि उनले शालिन ढंगले प्रस्तुत हुँदै कानुनको कठघरामा उभिने साहस देखाएका छन् । ऊच्च तहका नेताबाट नागरिक सर्वोच्चतालाई सम्मान गरि आफु उपर लागेको आरोपको सामना कानुनी प्रकृयाबाटै दिने एतिहासिक बाटो महराले तताई सकेका छन् । हस्त क्षेप र बार्गेनिङ रहित बाटोबाट पनि आफु माथि लागेको बातलाई मेटाउन सकिन्छ भन्ने बुझाई महराको रहेको पाईन्छ । त्यसैले उनले पार्टीका नेताहरुसँगको सरसल्लाह पछी छानबिनको प्रकृया नटुङिएसम्मका लागि भनेर उल्लेख गर्दै छदाखादाको सभामुख पदबाट तत्काल राजिना गरे । तर उनका आफ्नै पार्टीका मानिसहरुले असली चरित्र पेश गर्दै महरालाई आहत पार्ने काम भयो । नेताहरुले देखाउदै आएको यस्तो हतारोले पार्टी पंक्तिमा नै एकले अर्कालाई सिध्याउने घिनलाग्दो होडबाजी चलेको चर्चा आम रुपमा उठेको छ । आफ्ना गुटकालाई जोगाउने र अरुलाई फसाउने निती अहिलेका खुफिया नेताको धर्म नै बनेको छ । सत्ता र शक्तिले उन्मत्त खुरापातीहरुले महराको सवालमा देखाएको हतारो निकै शर्मनाक र अप्रिय रहेको पार्टी पंक्तिमा कुरा उठन थालेको छ ।
सभामुखको पदमा आसिन ऊच्च तहका नेताले आफ्नो राजनीतिक वा ब्यवसायिक वा पारिवारिक जुनसुकै निजी प्रयोजनको सिलसिलामा कोही कसैसँग गोप्य रुपमा भेटघाट गर्न पाउने कि नपाउने ? गोप्य वार्ताका लागि कुनै पाच तारे होटल वा विदेश नै जानु पर्ने वा ठुला बडाकोमा नै जानु पर्ने हो ? के सामान्य नागरिककोमा गोप्य वार्तालाप गर्नु उपर्युक्त नै हो त ? भनिन्छ मित्रता भन्दा ठुलो हितैसी आफन्तिमा पनि नहुन सक्छ, अझ राजनीति गर्ने मानिसमा त यो कुरा बढी नै लागु होला कि नहोला ? महिला र पुरुष कामको सिलसिलामा भेट गर्दा सबै अनैतिक नै हुन्छ ? एक महिला र एक पुरुष बन्दकोठा भित्र रहदैमा यौन कृयामा लिप्त हुन्छन होला ? रक्सी खाएको भन्ने कुरा निराधार र कपोकल्पित वा योजनाबद्ध हुन सक्दैनन ? सौदाबाजीको खेलमा महरालाई फसाउन खोजिएको त होईन ?
महरालाई अपराधी करार दिनु अघि यि सवाल बारेमा पनि ख्याल राख्नु मनाशिव हुनेछ । धर्म छाडेर अरुलाई हिलो छयाप्ने काम गर्नु सर्वथा राम्रो होईन । महरा दोशी भए नभएको पुस्टि हुन आवश्यक अनुसन्धान गर्न जरुरी हुँन्छ नै । त्यसका लागि राज्य सम्यन्त्रले काम कार्वही अघि बढाई सकेको छ । महरा हाल प्रहरी हिरासतमा छन । उनी माथि लागेको आरोप छानबिनबाट नै टुङिने हो । प्रहरीले अनुसन्धानलाई अघि बढाएको छ । र हामीले कम से कम पनि त्यो अनुसन्धानबाट निक्लने निस्कर्शको लागि प्रति क्षरत रहन जरुरी छ । विना अनुसन्धान कसैलाई पनि दोशी करार दिनु पक्कै पनि अन्याय हुनेछ । यथार्थता नबुझी पहिला नै हामीले आँफै फैसला गर्ने हो भने त्यसको परिणाम गलत मात्रै हुँदैन कि त्यो वेथितीको मतियार भएको ठहर्छ नै । यो वाक्यको अनर्थ नलगाईयोस पनि, किनकी कुनै अपराधी पनि नछुटुनसँगसंगै कोही निरपराधी पनि नफसुन भन्ने मान्यतालाई हामीले स्पेश दिनु नै एक कानुनी राज्यको दायित्व हो भन्ने हामी सबैले बोध गरौ भन्ने खोजिएको हो । साथै, कानुनी राज्य माथि विश्वास गर्ने जनताले सानो चित्त बनाउनु पनि हुँदैन । अझ देशको उच्च नेत्रीत्वमा रहेर काम गरेको मान्छेको सवालमा झनै हतारो गर्नु कदापी राम्रो होईन । किनकी कुनै न कुनै योगदानबाट उनीहरु माथि उठेका हुन्छन । अझ राजनीतिको क्षेत्र लागेका मानिसहरुलाई अपुस्ट आरोपको बिल्ला भिराउने खेलले भोली थुप्रै राजनीतिक कर्मीहरु राजनीतिक रिङ्ग बाट बहिर्गमन हुने दिन आउन नसक्ला भन्न सकिन्न ।
सवाल उठनु र आरोप लाग्नु एउटा पक्ष हो तर आरोप सधैं सत्य नहुन पनि सक्छ । त्यो प्रमाणले पुस्टि गरेको हुँनुपर्छ । महराको केश पनि अहिले विचाराधिन अवस्थामा छ । उनी अनुसन्धानको घेरामा छन । अनुसन्धानलाई बाधा नपुग्ने गरि उनले मार्ग प्रसश्त गरेका छन । यो नै विधीको शासनको पालना हो । विगतका घटनाले ऊच्च पदमा आसिन रहेको ब्यक्तिले शक्तिको आडमा नियम कानुनलाई कुल्चदै देखाउदै आएका हर्कत र हत्कण्डाका फेहरिस्त लामै छन् । प्रहरीले उजुरी नै नलिएका घटना बग्रेल्ती छन् । ’महरा सर’ धेरैले श्रद्धाले लिने नाम हो । राजनीतिक ब्रित्तमा गोटीका रुपमा उपयोग गर्दै तर मार्न पल्केकाहरुले महरालाई सधैं मोहरा बनाउदै आए भन्ने बुझाई उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुमा छ । हो त्यस्ता भुईफुट्टेहरुलाई चिन्न नसक्नु नै महराका लागि अभिशाप बन्न पुगेको छ । जसले आफ्नो दुनो सोझ्याउन महरालाई बलीको बोका बनाएका छन । अहिलेको सरकार एक पछि अर्को गर्दै काण्डै काण्डमा फस्दै आएको ध्रुब सत्य हो । महत्वकांक्ष योजना ल्याउने तर कार्यन्वयन गर्न नसक्ने अहिलेको सरकारको संगती बनेको छ । काण्डै काण्डमा फस्दै गएको र जनता रिझाउने काम पनि गर्न नसकेको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । अब यो सरकार यो अवस्थासम्म पुगिसकेको छ कि भोली कसैले पनि राजनीतिक, ब्यापारिक, ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि कसैलाई प्रयोग र्गयो भने पनि आफ्ना कोहीलाई पनि बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । किनकी सरकारलाई थप बदनाम बनाउनु भन्दा पनि आफ्नो सत्ता टिकाउन र आफ्ना गुटकालाई स्थापित गर्ने ध्याउन्नमा सरकार र पार्टी पुगेको यस घटनाले पुस्टि गरिसकेको छ । सरकार र पार्टी हाक्नेको मानसिकता नै हतासमा रहने गरे को छ ।
यौन दुर्व्यवहार काण्डमा मुछिएका कृष्ण बहादुर महराले आफ्नो पदबाट मात्रै राजिनामा दिएका छैनन कि आफु माथि लागेको गम्भिर आरोपको निश्पक्ष छानविनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका छन दसैंको मुखमा नै उनी प्रहरी हिरासतमा छन । विगत इतिहासका पानाहरु पल्टाउने हो भने सत्ता र शक्तिको बलमा यस्ता कयौ काण्डहरु दबाईएको छ । विधीको शासनलाई संस्थागत गर्ने सवालमा शासक वर्गहरु चुक्दै आएको तथ्य पनि हाम्रा सामु घाम झै छर्लङ छ । कयौ भ्रस्टचारका काण्डहरु अझै पनि जनताका मन बिझाइ रहेका छन् । चोरलाई चौतारी साधुलाई शुली भने झै धेरैले आशा गरेका र शालिन ब्यक्तित्वको छबि बनाएका, चार दशक भन्दा लामो राजनीतिक पृष्ठभुमी बोकेका कयौले श्रद्धाले शिर झुकाउने महरा सरलाई सफाईको मौका नदिनु अर्को महापाप हुनेछ ।
साभार :- http://corporatekhabar.com
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, आश्विन २४, २०७६, ०९:५७:००